အမေရိကန် အမျိုးသမီး တွေ ကို လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာပွင့်လင်းစေခဲ့ သူ ကွယ်လွန် | Freedom News Group
အမေရိကန် အမျိုးသမီး တွေ ကို လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာပွင့်လင်းစေခဲ့ သူ ကွယ်လွန်
by FNG on August 14, 2012	ငယ်လေး ၊ ၊ အိမ်ထောင် မကျသေးတဲ့ အမျိုး သမီး တွေ အနေနဲ့လိင် ကိစ္စ ကို ပွင့် လင်း စွာ လုပ် လို့ရတယ် ဆို တဲ့ ဆန်းသစ် တဲ့ အတွေး အခေါ် ကို လွန် ခဲ့ နှစ်ပေါင်း၅၀ လောက် ကတည်း က အမေရိကန် အမျိုး သမီး
ထု နဲ့မ်ိတ် ဆက် ပေး ခဲ့ တဲ့ နာမည် ကျော် အမေရိကန် အလှအပ နှင့် အမျိုးသမီး ရေးရာ မဂ္ဂဇင်း
အယ်ဒီတာ ဟယ်လင် ဂါလီ ဟာ အသက် ၉၀ အရွယ် တနင်္လာ နေ့ကွယ် လွန် ခဲ့ ပါတယ်။
1962 ခုနှစ် ၊ ဟယ်လင် အသက် ၄၀ အရွယ် မှာ သတင်းစာ နဲ့မဂ္ဂဇင်း တွေ မှာ ပါခဲ့ တယ့် သူရဲ့ 
ဆောင်းပါး တွေ ကို ပြန်လည် တည်း ဖြတ် ပြီး ထုတ်ဝေခဲ့ တဲ့ Sex and the Single Girls
ဆိုတဲ့ စာအုပ် ဟာ အမေရိကန် အမျိုး သမီး ထု ရဲ့ဘ၀ နေဟန် ကို ၁၈၀ ဒီဂရီ ပြောင်းပေး လိုက်တဲ့ စာအုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာ အုပ် ဟာ ထွက် ရှိ စဉ် အချိန် က ဝေဖန် ကန့် ကွက် မှု တွေ သောသော ညံ အောင် ရှိ ခဲ့ ပေမယ့် အခု အခါ မှာ တော့ ၄၆ ကြိမ် ပုံ နှိပ် ထုတ် ဝေခဲ့ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ၁၉၈၀ ခုနှစ် မှာ Time မဂ္ဂဇင်း ကြီး က အမေရိကန် နိုင်ငံ ကနေ စတင်ခဲ့ ပြီး Sexual Revolution
အတွက် အရေး အပါ ဆုံးသူ လို့သတ်မှတ် ခဲ့ ကြ တယ်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ မှာ ဟယ်လင် ကို အာကင်ဆတ် ပြည်နယ် က ဂရင်း ဖော်ရက်(စ) မှာ မွေး ဖွား ခဲ့ တယ်။ ဘွဲ့ ရ ပြီး ချိန် မှာ မဂဇင်း ဂျာနယ် တွေ မှာ ထည့် တဲ့ ကြော်ငြာ ပစ္စည်း တွေ ရဲ့ကြော်
ငြာစား သား တွေ ကို ကြော်ငြာ အယ်ဒီတာ က ပြောတဲ့ အတိုင်း စာစီ စာ ရိုက် ပေး ခဲ့ ရသူ အဖြစ်တာ
၀န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ရတယ်။ Sex and the Single Girls စာအုပ် ထွက် ရှိ ပြီး နောက် ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှ Cosmopolitan မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ 
အယ်ဒီတာ ချုပ် အဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ ပါတယ်။ နောက် ပိုင်း မှာ တော့
Cosmo ကို ထုတ်ဝေတဲ့ Hearest မီဒီယာ အုပ် စု မှာ နိုင်ငံ ခြား ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေမှု အစီအစဉ်
ရဲ့အယ်ဒီတာ ချုပ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ တယ်။
ဟယ်လင် နဲ့ပတ်သက် ပြီး သွားလေသူ မင်းသမီး ကြီး အဲလိဇဘက် တေလာ ကတော့ ” သူဟာ အမျိုး
သမီး တွေ ရဲ့ဘ၀ ကို ကမ္ဘာ သစ် နဲ့မိတ်ဆက် ပေး ခဲ့ တယ်။ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ လွတ်လပ် မှု ရဲ့အတား
အဆီး အချုပ် အနှောင် တွေ ကို တော်လှန် ဖို့နှိုးဆော်ခဲ့ သူ ” လို့ ချီး ကျုး ဂုဏ် ပြု ပြော ဆိုခဲ့ တယ်။ ကော်စမိုပိုလီတန်မှာ သူ အယ်ဒီတာ ချုပ် ဖြစ် ပြီး တဲ့ နောက်မှာ တော့ အမျိုးသမီး တွေ ရဲ့အာသာဆန္ဒ
လိင်ရမ္မက် ၊ အချစ် နဲ့ပကတိ အလှ တွေ ကို စာ ဖတ် သူ တွေ နဲ့ မိတ် ဆက်ပေး ခဲ့ တယ်။ ဟယ်လင် ဘရောင်း နဲ့ပတ်သက် ပြီး နယူးယောက် မြို့ တော် ၀န် မိုက် ကယ် ဘလွန်းဘတ် က ” ဟယ်
လင် ဟာ မီဒီယာ လောက တစ်ခု တည်း ကို သာ ပြောင်းလဲ ပေး ခဲ့ တာ မဟုတ် ပါဘူး ၊ ကျွန်တော် နိုင်ငံ
ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု ကိုပါ ပြောင်း လဲ စေခဲ့ သူ လို့CNN သတင်း ကို ပြောခဲ့ ပါတယ်။
အချစ် ရမ္မလှိုင်း နဲ့လိင်စိတ်အာသာ ဆန္ဒမှာ တစ်ကမ္ဘာ လုံး က မိန်းကလေး တွေ နိုးထ ကြ လို့ဆော်သြ
ခဲ့ ကြပေမယ့် ဟယ်လင် ဟာ လူမှုရေး တွေ မှာ ရှုပ် ပွေ သူ မဟုတ် ဘဲ The Jaws, The Sting စတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား တွေ ထုတ် လုပ် သူ ခင်ပွန်း သည် နဲ့၁၉၅၉ ခုနှစ် ကနေ ၂၀၁၀ သူ ကွယ်လွန် ချိန် အထိ
လက် ထပ် ပေါင်း သင်း ခဲ့ တယ်။ ဟယ်လင် ဟာ ၁၉၆၄ ခုနှစ် Sea and the Office ကို ထပ်မံ ထုတ်ဝေခဲ့ ပြီး ၁၉၈၄ ခုနှစ် မှာ ပထမ တစ်ရက်
တည်း အုပ် ရေ သိန်းချီ ရောင်းချ ခဲ့ ရတဲ့ ”Having It All: Love, Success, Sex, Money, Even If
You’re Starting With Nothing.” ဆို တဲ့ အမျိုး သမီး ဘ၀ အောင် မြင်ရေး စာအုပ် ကို ထုတ်ဝေခဲ့
၁၉၉၈ ခုနှစ် မှာ Vanity Fair နဲ့တွေ့ ဆုံ စဉ် မှာ ဟယ်လင် က သူ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်တဲ့ ” အကယ်၍ ဒါကို လုပ်
လို အပ် တယ် ဆိုရင် ၊ မင်း က လုပ် ချင် စိတ် မရှိ ဆိုရင် တောင် မှာ အောင်မြင် ပြီး မြောက် အောင် လုပ်ဆောင် ဖို့ 
လိုတယ် လို့ပြောခဲ့ ပါတယ်။
Santi Visalli/Getty | Images via New York Times via Cosmopolitan
#Helen Gurley #Sex Revolution
Tags: Cosmopolitan, David Brown, Hearst Corporation, Helen Gurley, Helen Gurley Brown, New York Times, Sex And The Single Girl, Sexuality	From: လူငယ်ရေးရာ, လူမှု ဘ၀	← Burma: Why Did The 8888 Generation Fall Into The Army’s Trap? – OpEd
ဒုတိယ သမ္မတ အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း ကို ရွေးချယ် →
September 8, 2012	daewoo	#
August 19, 2012	heinhtet	#
ဒါဆို သူ့ ကြောင့် အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေ ဒီနေ့ ခေတ်မှာ ဖင် ပက်ပက်စက်စက် ခံကြတာပေါ့နော်.
August 15, 2012	ak47	#
Lower standard heinhtet. i think yr mom didn’t teach u how to polite. are u from da hla or tar kay ta?
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,524,720 hits